Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Xayeysiinta
Siyaasadda adeegsiga macluumaadka Nidaamkani wuxuu sharxayaa macluumaadka aan ugu baahan nahay inaan ka shaqeyno si aan u taageerno xayeysiinta. Waa maxay noocyada macluumaadka aan ururinno? Si aan u siino alaabtayada waa inaan ka shaqeynaa macluumaadka adiga kugu saabsan. Nooca macluumaadka aan ururinno waxay kuxirantahay sida aad u isticmaasho alaabtayada. Waxaad baran kartaa sida ...
Waa Maxay Shaabinta Qabow?
waxaa qoray admin on 19-08-08
Tikniyoolajiyadda Tambarka Qabow ayaa isbarbardhig loogu sameeyaa midka dhaqameed ee Kuleylka kulul oo labaduba awood u leh inay gaaraan saameyn wax ku ool ah oo daabacaadda ah. Farqiga udhaxeeya ayaa ah in shaabbada qabow aysan ubaahneyn kululeyn marka la isticmaalayo. Taasi waa sheekada stampi qabow ...
Bandhiggii 7-aad ee Shiinaha ee Caalamiga ee Hindiya oo dhan ayaa si guul ah ku soo dhammaaday
On October 28 2018 the 7th China International All-India Exhibition ayaa si guul ah lagu soo gabagabeeyay Shanghai. Iyadoo hal-ku-dhigga ah "furitaanka xilligii daabacaadda sirdoonka" bandhigga sannadkan oo dhan-ka-mid ah wuxuu si buuxda u muujinayaa natiijooyinka dhiirrigelinta iyo isbeddellada horumarineed ee tikniyoolajiyadda daabacaadda ee ...
Kingfisher Labels ayaa rakibaysa toddobaad ee Edale flexo press
Kingfisher Labels oo xarunteedu tahay Yate north Bristol ee Boqortooyada Midowday ayaa ka iibsatay shirkadda 'Edale FL3' wargeyskeedii toddobaad ee dabacsan ee ka imanaya soo saaraha qalabka UK. Kingfisher Labels waxay u adeegtaa cunnooyinka la isku qurxiyo iyo daryeelka caafimaadka oo leh sumado isku-dhegan. Waxay rakibtay saxaafadeedkeedii ugu horreeyay ee Edale flexo sanadii 2001. Saxaafadeeda cusub ...
La wadaag Kheyraadka daabacaadda tartamayaasha Fairfax waxay xireysaa laba guri oo daabacan
Sida ku xusan heshiis lala galay shirkadda xafiiltanku News Corp si loo wadaago kheyraadka daabacaadda bishii Luulyo ee sannadkan shirkadda weyn ee Australiyaanka ah ee Fairfax ayaa xidhay laba warshadood oo wax lagu daabaco oo ku kala yaalay Queensland iyo NSW waxaana socda xaraashyo. Mid ka mid ah dhirta daabacaadu waxay ku taalaa Ormiston 25 km u jirta magaalada Brisbane bartamaheeda ...
Prati USA waxay magacaawday maareeye
Prati waxay magacowday Frank Hasselberg inuu noqdo shaqsiga hogaaminaya hoosaadkan cusub ee Waqooyiga Ameerika. Prati USA ayaa la aasaasay iyadoo shirkaddu dooneyso inay xoojiso ballanqaadkeeda suuqa Waqooyiga Ameerika. Hasselberg wuxuu horey ula soo shaqeeyay Kocher + Beck Heidelberg iyo Gallus Waqooyiga Ameerika ...
Parkside waxay mar kale maalgashi ku sameysaa goolasha leysarka
Parkside shirkad khaas ah oo wax ku duubta ayaa samaysay maalgashi aad u muhiim ah oo ku saabsan qalabka leysarka casriga ah si loo abuuro fursado ganacsi oo cusub. Maalgalinta ugu dambeysa ee leysarka waxay awood u siineysaa dhibcaha leysarka labada dhinac ee hal filim ama laminate si loo abuuro qaab fudud oo furan loona soo celiyo ...
Avery Dennison wuxuu Yurub gudaheeda ka bilaabay qalab casri ah oo loo yaqaan PET
Avery Dennison waxay sheegatay inay tahay alaab-qeybiyaha ugu horeeya ee calaamadeynta cadaadiska xasaasiga ah si loo soo bandhigo shaashadda laga sameeyay dib u warshadaynta PET (rPET) ganacsi ahaan Yurub. Khadka cusub ee rPET wuxuu isticmaalaa qashin-gadaal si taxaddar leh loo xushay waxaana la soo bandhigi doonaa Oktoobar 2018 dhowr is-adhe ah ...
Kodak si loo iibiyo qaybta baakadaha dabacsan
Kodak waa inay iibisaa qaybteeda baakadaha rogrogmada taasoo u oggolaaneysa inay diiradda saarto taarikada deegaanka ee software-ka shaqada ee inkjet iyo shatiyeynta calaamadaha. Qeybintu waxay soo saartaa oo suuqgeysaa nidaamka Flexcel NX ee qalabka wax lagu sawiro ee daabacaadda taarikada alaabada la isticmaalo iyo adeegga la xiriira ...
Amcor wuxuu la tartamaa Bemis inuu ku dego NASDAQ
Warshadaha baakadaha ayaa wajahaya dhibaatooyin badan sababtoo ah alaabada ceeriin ee sii kordheysa. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah shirkadaha baakadaha waaweyn ee adduunka ee Amcor (ASX: AMC) waxay la xaajootay shirkadda ay la tartameyso ee Mareykanka Bemis in ka badan sannad waxayna qarka u saaran tahay inay heshiis la gaarto shirkadda si ay ugu hesho $ 7 bilyan oo doollar oo ah e ...
Baakadaha Inovar waxay helayaan calaamadaha Topp
Kooxda Baako Inovar waxay soo iibsatay calaamadaha Topp oo kor u qaadaya awooddeeda ay ugu adeegayso suuqyada Florida iyo Koonfur-bari Mareykanka. Xarunteeduna tahay Dallas Texas Inovar waa beddelaha takhasuska leh ee sumadaha waaweyn ee iskudhafka gacmaha iyo alaabada baakadaha rogrogmi kara. Waxay u adeegtaa macaamiisha buluug-buluug ah oo ku dhexjiro quus ...
NPA SANCTIONS MAERSKLINE iyo SADDEX safafka rarka kale
Iyada oo qayb ka ah dadaalada lagu xallinayo mudaaharaadka darawalada gawaarida xamuulka ee Lagos Port Complex (LPC) iyo Tin Can Island Port (TCIP) Lagos Maamulka Dekedaha Nigeria (NPA) ayaa ku dhawaaqay hakad toban maalmood ah adeegyada afar Shirkadood oo Maraakiib ah. marka hore. Compet Shipping Comp ...
filim caag ah, kuleylka filimka, Kuubannada kulul, Foornada kulul, Gurdanka bireed kulul, soosaarayaasha filimka bopp metallized,